(၁၁) ရက်မြောက်နေ့မှတ်တမ်း (၅.၁၂.၂၀၁၆)
၁၁ ရက်မြောက်နေ့ အစီအစဉ် ( ၅. ၁၂. ၂၀၁၆ )
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ ကောင်းကြဲ(ပိတ်)ကျေးရွာအုပ်စု၊ နားမွန်းကျေးရွာအတွင်းရှိ တောင်သူ(၁၂)ဦး ပိုင်ဆိုင်သော ကွင်းအမှတ် (၁၀၂) ဆွမ်ကွယ်ကွင်းမြေနေရာအား တပ်သိမ်းမြေမှ မူလတောင်သူများထံ ပြန်လည်စွန့်လွှတ်ပေးပါရန်နှင့် နစ်နာသောတောင်သူများကို မည်ကဲ့သို့ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာမှုကို အကာအကွယ်ပေးနေသော ရဲဝန်ထမ်း(လုံခြုံရေး)အရေအတွက်ကို ထပ်မံတိုးမြှင့်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် ရပ်ရွာလုံခြုံမှုကို ပြည်သူလူထုအတွက် မည်ကဲ့သို့ကောင်းမွန်စွာ စီမံဆောင်ရွက်ထားသည်ကို သိရှိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း